IForbes ibeka iApple njengolona phawu lubaluleke kakhulu emhlabeni Ndisuka mac
IForbes ibeka iApple njengolona phawu lubalulekileyo ehlabathini
I-Fobers ephakathi iphinda iphinde kulo nyaka u-2017 ibeka i-Apple njengeyona nto ibaluleke kakhulu kwihlabathi, kwaye yileya yeCupertino Sele iphezulu kolu luhlu iminyaka esixhenxe yenziwe yimagazini. Ulawulo luka-Apple lugcinwa ngenxa yemveliso enayo kwikhathalogu yayo kwaye ngokucacileyo i-iPhone njengenkwenkwezi, kule meko ngokutsho kweForbes inkampani inayo ixabiso eliqikelelweyo nge-170.000 yezigidigidi zeedola, ukunyuka nge-10% kunani lonyaka ophelileyo kwaye kulindeleke ukuba olu nyuso lungapheli kule minyaka izayo.
Forbes Ibonisa amaxabiso afunyenwe yinkampani kwaye iqaqambisa ngaphezulu kwe-800 yezigidi zeedola ezigqithileyo kulo nyaka kumaxabiso entengiso. Inani abathi alizi kuyeka ukwanda kule minyaka izayo kwaye ngoku ngamarhe malunga neemveliso ezintsha ezinje nge-iPhone 8 engekafiki okanye iMac neMac Pro entsha, bayayeka I-Apple iyaqhubeka nokukhula kwinqanaba elincinci kodwa elizinzileyo unyaka nonyaka.
Kolu luhlu kubonakala kwindawo yesibini UGoogle uxabisa i-101.800 yezigidigidi zeedola ngumntu olungileyo. Kwezi zikhundla zilandelayo sifumana: iMicrosoft enezigidi ezingama-87.000 zeedola, i-Facebook enezigidi ezingama-73.500 zeedola kunye neCoca Cola enezigidi ezingama-56.400 zeedola. Ngaphandle kwamathandabuzo, iimveliso ezaziwayo nezibalulekileyo emhlabeni unyaka nonyaka jonga ukuba iApple ibekwa njani kolu luhlu.
Konke oku kusenza sicinge ngaye impilo entle yenkampani ekhokelwa nguTim Cook, kwaye sinokukhumbula ngoncumo abo bahlalutyi ababekade becinga okanye becinga okanye bade bachaze ukuba iApple inokuma okanye ingabinanjongo ukusukela ekunyamalaleni kukaSteve Jobs. I-Apple iyaqhubeka ukuba yeyona nkampani ibaluleke kakhulu kwihlabathi xa kuthelekiswa ne-100 ekhethwe ngale ndlela kwaye ayizizo iinkampani ezili-100 kuphela ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » IForbes ibeka iApple njengolona phawu lubalulekileyo ehlabathini
Ungalujonga njani ukhangelo kwifolda yokufumana okanye kulawulo
Imidlalo emitsha emi-3 yokonwabela iMac yakho